Yeremia 52 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Sedekia tew atua tiaa Babilon (1-3)
Nebukadnesar kaa Yerusalemfo hyɛɛ kurow no mu (4-11)
Wɔsɛee kurow no ne asɔrefi no (12-23)
Wɔde nkurɔfo no kɔɔ Babilon (24-30)
Woyii Yehoiakin fii afiase (31-34)
52 Sedekia+ bedii hene no, na wadi mfe 21, na odii ade mfe 11 wɔ Yerusalem. Ne maame din de Hamutal,+ na na ɔyɛ Yeremia a ofi Libna no babea. 2 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne sɛnea Yehoiakim yɛe no ara.+ 3 Yehowa abufuw nti na eyinom sisii wɔ Yerusalem ne Yuda kosii sɛ ɔtow wɔn fii n’anim kyenee.+ Na Sedekia tew Babilon hene so atua.+ 4 Sedekia ahenni afe a ɛto so akron, bosome a ɛto so du, bosome no da a ɛto so du no, Babilon hene Nebukadnesar* ne n’asraafo nyinaa baa Yerusalem so. Wɔkyekyee wɔn asoɛe wɔ kurow no ho, na wosii akoban* twaa ho nyinaa hyiae.+ 5 Wɔkaa kurow no mufo hyɛɛ wɔn kurow no mu kosii Ɔhene Sedekia ahenni afe a ɛto so 11 mu. 6 Bosome a ɛto so anan no da a ɛto so akron no,+ ɔkɔm no mu yɛɛ den wɔ kurow no mu, na na aduan biara nni hɔ mma asaase no sofo.+ 7 Ewiee ase no, wobuu kurow no fasu guu mu, na asraafo no nyinaa guan fii kurow no mu anadwo. Wɔrekɔ no, wɔkɔfaa ɔpon a ɛda afasu abien no ntam no mu, baabi a ɛbɛn ɔhene turo no. Na wɔde wɔn ani kyerɛɛ Araba kwan so. Saa bere no nyinaa, na Kaldeafo no atwa kurow no ho ahyia.+ 8 Na Kaldea asraafo no de mmirika taa Ɔhene Sedekia,+ na wɔkɔtoo no wɔ Yeriko sare so, na n’asraafo a wɔwɔ ne nkyɛn nyinaa hwetee. 9 Ɛnna wɔkyeree ɔhene no, na wɔde no foro kɔmaa Babilon hene wɔ Ribla wɔ Hamat asaase so, na obuu no atɛn. 10 Na Babilon hene kunkum Sedekia mma mmarima wɔ n’anim, na okunkum Yuda mpanyimfo no nyinaa nso wɔ Ribla hɔ. 11 Ɛnna Babilon hene sɛee Sedekia ani maa n’ani furae.+ Afei ɔde kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn guu no de no kɔɔ Babilon, na ɔde no too afiase kosii da a owui. 12 Bosome a ɛto so anum, bosome no da a ɛto so du, kyerɛ sɛ, Babilon hene Nebukadnesar* ahenni afe a ɛto so 19 no, awɛmfo so panyin Nebusaradan a ɔyɛ Babilon hene somfo no baa Yerusalem.+ 13 Ɔhyew Yehowa fi+ ne ɔhene fi* no ne Yerusalem afi nyinaa dwerɛbee. Afei nso, ɔhyew afi akɛse nyinaa dwerɛbee. 14 Na Kaldea asraafo a wɔka awɛmfo so panyin no ho no nyinaa dwiriw Yerusalem afasu a atwa ho ahyia no gui.+ 15 Na awɛmfo so panyin Nebusaradan faa mmɔborɔwafo a wɔwɔ ɔman no mu no bi, ne ɔmanfo a wɔaka wɔ kurow no mu no, na otuu wɔn ase de wɔn kɔe. Ɔsan faa wɔn a wɔde wɔn ho kɔmaa Babilon hene, ne adwumfo a wɔaka a wonim adwuma yiye no kaa ho.+ 16 Nanso awɛmfo so panyin Nebusaradan gyaw ɔman no mu ahiafo a wonni hwee no bi sɛ wɔnyɛ bobe mfuw mu adwuma ne nkoadwuma.+ 17 Na Yehowa fi hɔ kɔbere adum,+ ne trɔk a wɔde twe nsu,+ ne kɔbere Po+ a ɛwɔ Yehowa fi hɔ no, Kaldeafo no bubuu no asinasin, na wɔde kɔbere no nyinaa kɔɔ Babilon.+ 18 Na nea wɔde sesaw nsõ, sofi, adumgya, nkankyee,+ nkuruwa,+ ne kɔbere nneɛma a wɔde yɛ adwuma wɔ asɔrefi hɔ no nyinaa, wɔsesaw ɛno nso kɔe. 19 Na asɛn+ ne nkankyee a wɔde ogya gu mu ne nkankyee ne nea wɔde sesaw nsõ ne akaneadua+ ne nkuruwa ne nkankyee a wɔde sika kɔkɔɔ amapa ayɛ ne nea wɔde dwetɛ amapa ayɛ no,+ awɛmfo so panyin no sesaw kɔe. 20 Na adum abien no, Ɛpo no, kɔbere anantwi 12+ a Ɛpo no si wɔn so, ne trɔk a wɔde twe nsu a Ɔhene Solomon yɛ maa Yehowa fi no, kɔbere a wɔde yɛe no dodow nti, wɔantumi ankari. 21 Adum no, na ebiara tenten yɛ basafa 18,* na hama a ne tenten yɛ basafa 12 na etwa ho hyia.+ Ná ne sin anim yɛ nsateaa ano* anan, na na tokuru da mu. 22 Adum no ntaaso no, kɔbere na wɔde yɛe; ntaaso no baako tenten yɛ basafa anum;+ atena ne granate akutu* a etwa ntaaso no ho hyia no, kɔbere na wɔde yɛɛ ne nyinaa. Edum a ɛto so abien no nso, saa ara na na ɛte, ɛne granate akutu no nyinaa. 23 Ná granate akutu a ɛwowɔ ho no yɛ 96; wɔka ne nyinaa bom a, granate akutu 100 na na atwa atena no ho ahyia.+ 24 Bio nso, awɛmfo so panyin no faa ɔsɔfo panyin Seraia+ ne n’abadiakyiri ɔsɔfo Sefania+ ne apon ano ahwɛfo baasa no de wɔn kɔe.+ 25 Nnipa a ɔfaa wɔn fii kurow no mu kɔe no bi nso ne ahemfi panyin baako a ɔda asraafo no ano, ne mmarima baason a wɔwɔ kurow no mu a wɔne ɔhene tu agyina, ne ɔsahene no kyerɛwfo a ɔboaboa dɔm ano wɔ asaase no so, ne ɔmanfo no mu mmarima 60 a na wɔda so wɔ kurow no mu. 26 Awɛmfo so panyin Nebusaradan faa wɔn de wɔn kɔmaa Babilon hene wɔ Ribla. 27 Na Babilon hene kunkum wɔn wɔ Ribla+ wɔ Hamat asaase so. Saa na ɛyɛe a wotuu Yudafo ase fii wɔn asaase so kɔɔ obi man so.+ 28 Eyi ne nnipa dodow a Nebukadnesar* tuu wɔn ase de wɔn kɔe: afe a ɛto so ason no mu, Yudafo 3,023.+ 29 Nebukadnesar* ahenni afe a ɛto so 18 mu no,+ nnipa* 832 na wɔfaa wɔn fii Yerusalem kɔe. 30 Nebukadnesar* ahenni afe a ɛto so 23 mu no, Yudafo a awɛmfo so panyin Nebusaradan tuu wɔn ase de wɔn kɔe no yɛ nnipa* 745.+ Nnipa* a wotuu wɔn ase de wɔn kɔe nyinaa si 4,600. 31 Bere a wɔkyeree Yuda hene Yehoiakin kɔe no, afe a ɛto so 37,+ bosome a ɛto so 12 no da a ɛto so 25 no, Babilon hene Ewil-Merodak, afe a ɔbɛyɛɛ ɔhene no, ogyaa Yuda hene Yehoiakin,* na oyii no fii afiase.+ 32 Ɔne no kasae kama, na ɔmaa n’ahengua so sen ahemfo a aka a wɔka ne ho wɔ Babilon no nhengua. 33 Enti Yehoiakin yii n’afiase ntaade, na ne nkwa nna nyinaa, odidii wɔ ɔhene pon so daa. 34 Wɔde aduan fii Babilon hene nkyɛn brɛɛ no da biara, ne nkwa nna nyinaa, kosii ɛda a owui.
^ Nsateaa ano baako yɛ sɛnt. 1.85 (ntk. 0.73). Hwɛ Nkh. B14.
^ Nt., “ɔmaa Yuda hene Yehoiakin ti so.”